Tratra nangalatra tanaty kaomisaria : Nadoboka am-ponja avy hatrany
Vous êtes ici: Accueil → Faits-Divers → 2018 → mai → 19 → Tratra nangalatra tanaty kaomisaria : Nadoboka am-ponja avy hatrany
Redaction Midi Madagasikara 19 mai 2018 0 Commentaire
Sasatry ny miaina sa mba te hitsidika an’Antanimora ? Lehilahy iray no nampidirina am-ponja avy hatrany, rehefa tratra, teo am-pangalarana môtô nipetraka teo an-tokotanin’ny … pôlisy tetsy Mahamasina.
Na ireo pôlisy aza gaga ny amin’ny fahasahian’ity ranamana iray ity. Noheveriny tokoa mantsy fa mipetra-potsiny tsy misy mpiambina ireny biraon’ny pôlisy na kaomisaria ireny, rehefa alina ny andro ka nampitsiry ny heviny hangalatra ilay môtô nipetraka tsara teo an-tokotany. Ny herinandro lasa teo iny no nisehoan’ity trangam-piarahamonina mahatalanjona ity tetsy amin’ny kaomisarian’ny boriborintany fahadimy tetsy Mahamasina. Tsy nisalasala mihitsy mantsy ity lehilahy iray ity nitsambikina ny tambohon’ny kaomisaria, tokony ho tamin’ny misasak’alina teo. Nitampify tao anaty haizina ny anao lahy no sady somokitra namaha ny lohan’ilay môtô tamin’ny alalan’ireo lakile maromaro teny an-tanany. Tamin’izay indrindra anefa izy no tra-tehaky ny pôlisy izay niambina io biraon’ny mpitandro filaminana io.
Tena fahasahiana mihoapampana ! Mampametra-panotaniana ny hoe, raha voavahany teo moa izany ilay môtô, dia taiza no navoakany ? Ny vavahady tsy maintsy misy miambina moa ilay izy tsy mety hatsambikina toy ny nidirany tao amin’ilay tokotany ? Araka ny fampitam-baovao azo dia tsy izy irery no niketrika ity « mission impossible » ity fa nisy namany iray nijanona teny ivelan’ny tokotany, saingy nirifatra nitsoaka ity farany raha vao tazany fa tra-tehaka ilay namany. Efa eo am-pikarohana ity namany ity rahateo ireo mpitandro filaminana amin’izao fotoana izao. Ity lehilahy ity kosa, rehefa natolotra teny anivon’ny Fampanoavana dia nadoboka am-ponja avy hatrany. Eto dia mampahatsiahy ny eo anivon’ny pôlisim-pirenena, indrindra fa ho an’ireo izay mbola mikasa ny hanao toy ity ranamana ity, fa « voasokajy ho faritra mena ny Kaomisaria indrindra ao anatin’ny toe-draharaha mafampàna misy eto amin’ny firenena izao, ary hentitra ny fepetra sy ny sazy ampiharina manoloana ny tranga tahaka itony ».